Izindaba - Ukuthuthuka kobuchwepheshe benkomfa ngevidiyo
Ibhodi Lebhodi Ehlakaniphile Erekhodikayo ye-LED
I-Smart Blackboard 146”
I-Smart Blackboard 162”
I-Smart Blackboard 185”
Amaphaneli e-LED Interactive
Iphaneli ye-LED Interactive 65″
Iphaneli ye-LED Interactive 75″
Iphaneli ye-LED Interactive 86″
Iphaneli ye-LED Interactive 98″
Iphaneli ye-LED Interactive 55″
Isikrini sokuthinta esisebenzayo se-LED
I-Conference Interactive Flat Panel
Ibhodi elimhlophe elisebenzisanayo
I-Interactive Whiteboard 82″
I-Interactive Whiteboard 96″
I-Interactive Whiteboard 105″
I-Interactive Whiteboard 140″
I-Multimedia All-in-one Whiteboard
Itheminali Esebenzisanayo Yegumbi Lokusingatha
Itheminali Esebenzisanayo Yegumbi Lezifundo
I-Multimedia All-in-one PC
I-Multimedia All-in-One FC-4000
I-Multimedia All-in-one FC-7000
Okuhlobene Nesixazululo Sezemfundo
2.4G+ Isilawuli kude se-All-in-one
Ukuthuthuka kobuchwepheshe benkomfa ngevidiyo
Njengobuchwepheshe bokuxhumana obuthuthuke kakhulu, inkomfa yevidiyo enencazelo ephezulu ingenziwa ngokufinyelelwa ku-inthanethi kuphela. Ithathe indawo yengxenye yohambo lwebhizinisi futhi yaba imodeli yakamuva yezokuxhumana, ethuthukisa ukusebenza kahle kokuxhumana nokuphathwa kwabasebenzisi, futhi yehlise izindleko zokuhamba zebhizinisi. Eminyakeni yamuva nje, ukusetshenziswa komhlangano wevidiyo kukhule ngokushesha kusuka kuhulumeni, ezokuphepha komphakathi, ezempi, enkantolo kuya kwezesayensi nobuchwepheshe, amandla, ukunakekelwa kwezokwelapha, imfundo kanye neminye imikhakha. Cishe ihlanganisa zonke izici zokuphila.
Ukwengeza, uhlelo lwenkomfa ngevidiyo luqukethe uhlelo lwenkomfa yezwi luvumela bonke abasebenzisi bedeskithophu ukuthi babambe iqhaza engqungqutheleni yezwi nge-PC, okuphuma enkomfeni yevidiyo. Njengamanje, isistimu yezwi iphinde ibe yinkomba yenkomfa yevidiyo esebenza ngezindlela eziningi.
I-EIBOARD Conference Solution inikezela ngemikhiqizo ehlukahlukene ngesidingo segumbi elinosayizi ohlukile njengegumbi elincane, eliphakathi nendawo nelikhulu. Abasebenzisi bangakhetha idivayisi ehlukile ngokuya ngosayizi wegumbi lomhlangano. Asisekeli ikhamera kuphela noma i-Speakerphone, kodwa futhi isisombululo esihlanganisiwe sesistimu yenkomfa ngevidiyo ezokwakhiwa ngesinyathelo esisodwa. Woza ne-EIBOARD Conference Solution ukuze ujabulele umuzwa wokugcina wenkomfa ngevidiyo.
Isikhathi sokuthumela: Oct-30-2021
:Isakhiwo A2, Dawei Shahe Industrial Park, Gongming Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, China :+86-0755-29645993 :kerry@ei-whiteboard.com
Chofoza u-Enter Ukusesha noma u-Esc ukuze uvale